Ergayga QM ee Somalia oo Al-shabaab ku Eedeeyay Askaraynta Caruurta – Radio Daljir
Maarso 27, 2016 2:43 b 0
Jariiban, 27, March, 2016-(Daljir)_Ergayga Gaarka ee QM ee Arrimaha Somalia, Michael Keating ayaa qeylo-dhaan ka muujiyey waxa uu ugu yeeray carruurta ay Alshabaab u adeegsanayso dagaalladda ay ka wadaan gudaha Somalia.
Hadal-qoraal oo uu maanta soo saaray ayuu ku sheegay inuu ka xun yahay tiradda Carruurta ka tirsanaa Alshabaab ee ay Ciiddanka Puntland ku qabteen dagaalladdii dhawaan ka dhacay qeybo ka mid ah Goballadda Puntland.
Waxa uu ku tilmaamay inay daad-gureynta Alshabaab ee Carruurtaasi tahay arrin Xukun Gaar ah leh, waa sida uu hadalka u yiri.
“Carruurtan waxay u baahan yihiin Kaalmo, iyo in la qaado tallaabo kasta oo muhiim ah si loo dhaqan-celiyo iyo inay ugu dambeyn la midoobaan Qoyaskooda” ayuu yiri Micheal Keating.
Waxa uu intaasi ku daray inay carruurtaasi ka mid yihiin Tobaneeyo Xag-jirayaal oo lagu qabtay Deegaanadda Xeebta leh ee Puntland, kadibna loo wareejiyey caasimadda Puntland ee Garowe, waa sida uu hadalka u yiri.
Dhinaca kale, Ergayga Gaarka ee QM ee Arrimaha Somalia, waxa uu tilmaamay inay Madaxda Mamaulka Puntland la galeen Wada-xaajood wanaagsan oo ku aadan in la isku duwo tallaabooyinka lagu xaqiijinayo inay carruurtaasi helaan daawaynta saxda oo waafaqsan Xuquuqda Caalamiga ee Aadanaha iyo Sharuucda Aadminimadda.
Si kastaba ha ahaatee, Madaxweynaha Dowladda Federalka, Xasan Sheekh Mxaamuud waxa uu bishii Janaayo 20-dii ee sannadkii hore ee 2015-kii saxiixay Heshiiska QM ee Xuquuqda Carruurta, iyadoo ay horey 194-Dowladood u saxiixeen Heshiiskaasi 26-kii sanno ee la soo dhaafay.